Composers oo ay Music Qadiimiga ah oo caan ku
Download free music, samee YouTube sida Your Source Music Personal
Marka aan ka fekero music classical aan inta badan ka fikirto shuqullada Mozart ama Bach iyo sidoo kale shaqooyin kale oo ka weyn. Qof walba waa ogyahay in music classical qiyaastii ka ab iyo waa nooc ka mid ah si fiican u farsameeyo of music maanta. Weli Qadiimiga ah music , sida nooc kasta oo kale oo music sii wadaan in ay umuuruhu muddo ka dib sida composers jiilka cusub si ay u sii horumariyaan. Haddii aad u maleyso inay saabsan music runta ah waa nooc ka mid tahay ku nool sida ay wax sii wadaan in ay koraan oo ay bedesho waqti. Halkan waxaa ku qoran qaar ka mid ah hogaanka toban composers casriga classical ee maanta.
Laxamiistaha casriga ah waa ka mid ah mid ka mid ah artist maanta cusub. Waxa uu si fiican u yaqaan in uu inta badan CD-yada iyo diiwaanka iibiso online. Isagu waa ku firfircoon ee bulshada madaxdii muusikaystayaasha, oo uu ka kooban xabbadood badan heesta. Waxaa lagu yaqaanaa shuqulladiisa:
Shan Songs Cibraaniga Love
• Habeenka Water
Biyaha Night (Waayo, Strings)
David Lang caan ku tahay oo uu Pulitzer Prize guuleystay riwaayadaha vocal ayaa gabar Xaraaradda kulanka Little. Magaciisa ayaa ka soo muuqday magazine fargeeto beero iyo sidoo kale Times New York. Waxaa lagu yaqaanaa shuqulladiisa:
Little Xaraaradda kulanka Girl
Corigliano waa laxamiistaha si fiican loo aasaasay muusikada ayaa tegey oo ku guuleysta seddex abaalmarinta uu music oo ay ku jirto Abaalmarinta Academy ah, Pultizer Prize iyo Grawemeyer Prize. Shuqulladiisa oo ka mid ah:
Best yaqaan post-classical music, Richter ayaa ka kooban xabbadood badan oo filimo iyo xaflado. Isaga oo music inay la ogyahay in ay ka yar oo casri ah iyo in ka badan oo style weyn classical, halkan ka "classical post".
Recomposed By Max Richter: Vivaldi, Afar xilliyada
Blue xusuus qorka ay The
Mid ka mid ah Sargaalkan composers yaraa kuwaas oo degay article ah ee New Yorker ay shuqulkiisa u sameeyaan, Muhly ayaa ka kooban shuqullo badan oo qurux badan oo ah fanka iyo waxaa si fiican u yaqaan in music bulshada classical. Yaqaano shuqulladiisa:
6. Qiimaha Part
Music Part ayaa ku tiirsan badan oo ku saabsan boqortooyada ruuxiga ah kuna habaysan style music classical. Ogyahay maxaa yeelay, shuqulladoodu:
Arvo Qaybta: Te Deum
Waxaan u imid inaan Ruuxa Quduuska ah
Qaybta: Tabula Rasa
Steve Reich caan ku tahay farsamo uu muusikada, taas oo uu ku tilmaamay "xirxirin" imples xilli muusikada, taas oo laba alaabtii muusikada ciyaaro hagaagsan baxaan jiho kale oo gabal music ka yar labaad abuurista dhawaaq u gaar ah si fiican. Yaqaano waayo, shuqullada:
WTC 9/11, Mallet danbeeyay afar maalmood, Qaababka Dance
Yaqaano shuqulladiisa sida dhexdhexaadka ah orchestral heli karo, laga yaabee in uu yahay mid ka mid ah tirooyinka aad u muhiim ah in Zaman music classical casriga maanta.
On The Transmigration naftiinna
Tani laxamiistaha adduunka caan ku takhasusay operas ka daran minimalist oo waa magaca qoyska caadiga ah. Yaqaano waayo, shuqullada:
Philip Glass - The Etudes Piano Buuxi
Greenstein lagu yaqaan bilaabo Amsterdam Cusub Records iyo sidoo kale Music, tiiyoo ay u Festival. Shuqulladiisa oo ka mid ah albums:
Maya Study 3
> Resource > Music > Top 10 Composers casriga ah iyo waxay Music Qadiimiga ah oo caan ku